तपाई कस्ति युवतिलाई मनपराउनुहुन्छ ? यी १० व्यवहार कहिल्यै नगर्नुहोस् है « Deshko News
तपाई कस्ति युवतिलाई मनपराउनुहुन्छ ? यी १० व्यवहार कहिल्यै नगर्नुहोस् है
त्यसो भए यी १० व्यवहार कहिल्यै नगर्नुहोस्
१. सोसल नेटवर्किङमा पिछाः
२. विवाहको बारेमा संकेत नदिनुहोस्ः
पुरुषहरु कुनै पनि कमिट्मेन्ट गर्न डराउँछन् भन्ने कुरा पुराना भइसकेको छ । वास्तविकता के हो भने महिलाहरु कम परिचित पुरुषहरुसँग कमिटेड हुन डराउँछन् ।
हुनसक्छ तपाईं आफ्नो सम्बन्धप्रति निकै सिरियस हुनुहुन्छ होला र उनीसँगै आफ्नो बाँकी जीवन व्यतित गर्न चाहनुहुन्छ होला तर उनले तपाईंले जे सोच्नु भएको त्यस्तो नसोचेको हुनसक्छ । पहिले आफूले मनपराएको महिलाको तपाईंप्रति राख्ने भावनाको बारेमा बुझ्नुहोस् ।
३. पैसाको सो–अफ नगर्नुहोस्ः
४. पटक–पटक अपडेट लिइरहन आवश्यक छैनः
कसैलाई बुझ्न चाँहदै हुनुहुन्छ भने उनको हरेक मिनेटको खबर लिइरहन आवश्यक छैन । यो सोच्नुहोस्, तपाईंलाई भेट्नुभन्दा अघि पनि उनी खाना खान्थिन्, तपाईंको गुडनाइट मेसेज बिना नै सुत्ने गर्थिन ।
पटक–पटक अपडेट लिने तपाईंको बानीले तपाईं पागलजस्तै उनको पिछा गरिरहनुभएको छ त्यसकारण महिला तपाईंसँग नजिक हुनुको साटो टाढा हुनेछिन् ।
५. पटक–पटक फोन नगर्नुहोस्ः
६. बिल सधैँ आफैँले नै नतिर्नुहोस्ः
७. सेक्सको कुरा नगर्नुहोस्ः
केहि दिन पहिले मात्र सुरु भएको तपाईंको सम्बन्धमा सेक्सको बारेमा कुरा नगर्नुहोस् । यसले तपाईंको छविलाई बिगार्ने गर्दछ ।
तपाईंले सेक्सको बारेमा कुरा गर्दा ती महिलाले तपाईंले पहिले पनि अरु थुप्रै महिलालाई प्रयास गरिसकेको उनले बुझ्नेछिन् । आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनका लागि थोरै समय दिनुहोस् ।
८. पुरानो सम्बन्धमा घमण्ड नगर्नुहोस्ः
९. नचाहिने कुरामा उपहार बर्साउनु ठिक होइनः
१०. पर्सनल लाइफमा बाधा नपुराउनुः
महिलालाई उनको पर्सनल लाइफ र उनीहरुको साथीको बारेमा थाहा पाउने कोसिस नगर्नुहोस् ।